आंखै अगाडि आमालाई मारेको देखेका दलित बालकको बयान ! - USNEPALNEWS.COM
आंखै अगाडि आमालाई मारेको देखेका दलित बालकको बयान !
२६,मंसिर ।ममी (लक्ष्मी नेपाली) त्यस दिन (मंगलबार) गाउँकै छिमेकी च्याङ्बा तामाङको कोदो टिप्न जानुभएको थियो । म दुई वर्षको सानो भाइ सुशीललाई हेरेर घरमै बसेको थिएँ । त्यहीबीचमा भाइ धेरै रोयो । सायद आमाको दूध खान खोजेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यसैले मैले भाइलाई दूध खुवाउन ममी भएकै ठाउँमा लगेँ । त्यतिवेला सायद चार बजेको थियो होला । ममीलाई कोदो टिप्ने मेलामा भेट्यौँ । मेलाबाट छुटेपछि ममीले म र भाइलाई हतार–हतार घर ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो । किनकि घरमा गाई दुहुना छ, त्यसैले ममी आत्तिनुभएको थियो ।
त्यस्तै, करिब ५ बजेको हुनुपर्छ ।मेरो स्कुलमा सामाजिक विषय पढाउने सर (हीरा लामा) र उहाँको आमा (काइलीमाया तामाङ) मोटरसाइकलमा आएर हाम्रो घर जाने बाटोमा बसेका रै’छन् । हामी आफ्नै बाटोतिर थियौँ । तर, बाटो रोकेर सरकी आमाले बोक्सी, राँ…,र… भन्दै मेरो ममीलाई लखेट्न खोज्नुभयो । तर, ममी भाग्नुभएन ।त्यसपछि हीरा सरले समेत समातेर मेरी ममीलाई नजिकै रहेको सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा लगे । त्यो हाम्रो विद्यालय हो, जहाँ हीरा सरले सामाजिक शिक्षा पढाउनुहुन्छ ।स्कुलको मैदानमा भलिबलको पोल छ । त्यही पोलमा हीरा सर र उहाँको आमाले मेरो ममीलाई बाँध्न लाग्नुभयो । तर, पोलमा काँटी रहेछ, ठेलमठेल हुँदा काँटीले सरकी आमालाई घोच्यो । त्यसैले उहाँ एकैछिन रोकिनुभयो । त्यतिन्जेलसम्म गाउँलेहरु जम्मा भइसकेका थिए ।
छिमेकी साइला तामाङकी श्रीमती निरमाया तामाङले नाम्लो दिइन् ।नाम्लो लिएर हीरा सर आफैँले ममीलाई गेटमा बाँध्नुभयो । सुरुमा घाँटी र कुममा बाँधेर हीरा सरले ममीलाई कुट्न थाल्नुभयो । त्यतिन्जेलसम्म हीरा सरको आमा अन्त कता जानुभयो थाहाभएन । पछि त दिसा लिएर आउनुभयो ।सरको आमा आइसकेपछि दिसा खुवाउन खोजे,ममीले मान्नुभएन । त्यसैले मेरो ममीको खुट्टा पनि बाधेँ र दिसा खुवाइदिए । त्यसपछि पनि गाउँलेहरु त्यहीँ बसिरहे । केहीबेरमा उनीहरुलेछोडिदिएपछि म र भाइलाई लिएर ममी घरतिर हिँड्नुभयो ।हामी मेलडाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका थियौँ । पछाडिबाट हीरा सर दाउराको चिरपट बोकेर आउनुभएको रैछ । अनि ममीको कपाल समाएर लडाउनुभयो र खुट्टाले थिच्नु भयो । चिरपटले ममीको टाउकोमा हान्नु भयो । ममीको टाउकोमा गहिरो घाउ लाग्यो । ममीको टाउकोबाट रगत बगिरहेको थियो ।त्यसपछि पनि सरले ममीको छातीमा चार लात्ती हान्नुभयो । गाउँमा हल्ला भइसकेछ ।
मेरो हजुरआमा (विष्णुमाया नेपाली) पनि बाटोमै आइपुग्नुभयो ।उहाँ ६० वर्षको हुनुहुन्छ । मेरो बुहारीलाई किन पिटेको भनेर के भन्नुभएको थियो, हीरा सरले ‘न करा तेरो पनि छात्ती फुटाइदिन्छु’ भन्दै फेरि ममीतिर झम्टनुभयो । मैले धेरै भयो, मेरो ममीलाई नपिट्नोस् सर भनेँ । उहाँ ममाथि पनि झम्टनुभयो । त्यसपछि स्थानीय लालबहादुर तामाङकी श्रीमती आएर छुट्याउनुभयो । तर, मेरोममी बाटोमा लडिरहनुभएको थियो, उठेर हिँड्न सक्नुभएन ।पछि म र मेरो अंकल (दिनेश नेपाली) मिलेर दुबैतिरको कुममा उचालेर घर पुर्यायौँ । बेलुकी घर गयौँ ।
अर्को दिन बुधबार बुबा मिलन नेपाली काठमाडौंबाट घर आउनुभयो ।बुबा काठमाडौंमा घर बनाउने मजदुरी गर्नुहुन्छ । त्यो दिन अस्पताल जाने कुरा भयो । तर, ढिलो भएकोले जान सकिएन। धुलिखेल आउन तीन घन्टा लाग्छ भन्नेकुरा भयो । बिहीबार बिहान ममी उठ्न सक्नुभएन ।त्यसैले गाउँको स्वास्थ्यचौकी पुगेर हामीले औषधि लिएर आयौँ । घरमा ममीलाई औषधि दिँदै थियौँ । आँगनमा पुलिस आइपुग्यो । पुलिससँगै हीरा सर र गाउँका धेरैजना हुनुहुन्थ्यो । गाउँका १५ जनाको हस्ताक्षर गरेर मिलापत्र गरियो ।मिलापत्र भएपछि प्रहरी फर्किए, गाउँले घरघर गए । बेलुका बुबा र म सँगै सुत्यौँ । ममी नजिकैको टहरामा सुत्नुभयो ।
बिहान हजुरआमाले मलाई उठाउनुभयो । तिम्रो आमा अहिलेसम्म किन उठिन गएर बोलाएर लिएर आउ भनेर पठाउनुभयो । म टहरामा पुग्दा ममी ओछ्याननजिकै भुइँमा ढलिरहनुभएको थियो । मैले बोलाउँदा बोल्नुभएन । अलिअलि सास फेरिरहनुभएको थियो । मैले पानी खुवाएँ । आमाआमा भनेर बोलाएँ । उहाँ बोल्नुभएन ।म चिच्याएको सुनेर गाउँलेहरु जम्मा भए । गाउँलेहरुले पुलिसलाई खबर गरे ।सबैजना जम्मा भएका थिए, त्यतिन्जेलसम्म मेरी ममीको मृत्यु भइसकेको थियो ।
मैले हीरा सरलाई देखाएर पुलिसलाई भनेँ, ‘मेरी ममीलाई डोरीले बाँधेर दिसा खुवाउने, टाउकोमा चिर्पटले हान्ने र छातीमा लात्तीले हान्ने मान्छे यही हो ।’ मैले घटना सुनाएपछि हीरा सर भाग्न खोजे । तर, पुलिसले उनलाई पक्राउ ग-यो ।
पुलिस अंकलहरुले बोलाएको हुनाले म हिजो (शुक्रबार) धुलिखेल आएको हुँ । तर, सँगै मेरो बुबालाई पनिभित्र थुनेर राखेको छ । किन थुनेको मलाई थाहा छैन ।